Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Israel Na -agbasa Akụkọ » Israel ga-ewepụta balloon nchekwa ikuku ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Israel Na -agbasa Akụkọ • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Israel na-agbasi mbọ ike imeziwanye ihe nchebe ikuku ya n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi nchegbu maka mmụba nke drones na ngwa agha ndị Iran mere na mpaghara Middle East. A na-achọkwa steeti ndị Juu ugboro ugboro site na rọketi arụ ọrụ na balloons ọkụ, nke otu Hamas na-eyi ọha egwu si Gaza butere.
Sistemụ mweta ogbunigwe na ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ ga-abawanye ikike nchebe ikuku nke Israel.
Irigi Eluigwe ga-eto usoro nchọpụta nke ala Israel dị ugbu a site n'itinye ihe mmetụta ọzọ na elu elu.
Usoro a, nke Israel na US jikọrọ aka, enwetala ule na-aga nke ọma n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya.
Mịnịstrị na-ahụ maka nchekwa nke Israel kwupụtara na ọ na-akwado ibido nnukwu blimp nke ga-ebu usoro nchekwa ikuku nke ọgbara ọhụrụ.
Ministri ahụ bipụtara obere vidiyo na ntanetị na Wednesde, na-egosi nnukwu balloon na-efe efe site n'akụkụ dị iche iche.
Dị ka ozi ụlọ ọrụ ahụ si kwuo, usoro mpụta ogbunigwe na ụgbọ elu ọgbara ọhụrụ ga-abawanye ikike nchebe ikuku nke Israel.
Ekwupụtabeghị nkọwapụta kpọmkwem ụgbọ elu ahụ, nke akpọrọ 'Sky Dew', mana a kọwara ya dị ka otu n'ime ụdị ya kachasị ukwuu. A na-ekwu na radar ya nwere ike ịchọpụta ngwa ọgụ ndị nwere ogologo ogologo na-abata, ngwa agha ụgbọ mmiri na drones.
The usoro, jikọrọ ọnụ mepụtara Israel na US, enwetala ule na-aga nke ọma n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya ma na-eme atụmatụ itinye ya n'ọrụ n'ebe ugwu nke mba ahụ n'oge na-adịghị anya, dị ka ozi si kwuo.
Sky Dew ga-akwado usoro nchọpụta nke ala Israel dị ugbu a site n'itinye ihe mmetụta ọzọ na elu elu. Rada dị elu dị otú ahụ na-enye uru teknụzụ na arụmọrụ dị ukwuu maka nchọpụta mmalite na nkenke.
Mịnịsta na-ahụ maka nchekwa nke Israel Benny Gantz toro blimp ahụ dị ka “mmepụta teknụzụ ọzọ nke ga-ewusi nchekwa nke mbara igwe Israel na ụmụ amaala Israel ike.” Usoro ọhụrụ ahụ “na-ewusi mgbidi nchebe nke Israel wuworo n’ihu nke egwu ikuku dị anya na nke dị nso nke ndị iro ya na-ewu,” ka o kwuru.
Ọnụ ọgụgụ ndị nwụrụ n'akụkụ Israel site na nnukwu mgbanwe ọkụ, n'oge ọkụ ọkụ dị n'etiti Israel na Hamas na May, ruru mmadụ 12, gụnyere ụmụaka abụọ.